नक्कली परीक्षार्थी भएर कोरियन भाषा परीक्षामा दिँदै हुनुहुन्छ, होसियार ! :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
नक्कली परीक्षार्थी भएर कोरियन भाषा परीक्षामा दिँदै हुनुहुन्छ, होसियार !
सरकारले रोजगारीका लागि कोरिया जान आवेदन दिएका ७५ हजार युवाहरुको प्ररम्भिक छनोटका लागि लिईने भाषा परीक्षाको तयारी पुरा गरेको छ ।
तयारीसँगै नक्कली परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी भएको शंका लागे सोधपुछ गरिने र गल्ती देखिएका प्रहरीलामा जिम्मा लगाई कानुनी कारबाही गरिने जनाएको छ ।
शाखाले अघिल्लो वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि शंकापद नक्कली परीक्षलाई रोक्नका लागि संक्कल एमआरपी र रंगिन प्रवेशपत्र अनिवार्य गरेको छ । परीक्षामा शंकास्पद नक्कली परीक्षार्थी पहिचानका लागि कोरिया र नेपाल पक्ष मिलेर नियन्त्रण गरिने जनाएको छ ।
परीक्षामा प्रत्येक परीक्षार्थीलाई नाम, रजिष्ट्रेशन नम्बर उल्लेखित प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका उपलब्ध गराइने जनाउदै परीक्षर्थीलाई प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिकामा उल्लेखित आफ्नो नाम तथा रजिष्ट्रेशन नम्बर मिले नमिलेको यकिन गर्न समेत शाखाले अनुरोध गरिएको छ । परीक्षामा अनुचित कार्य गर्ने परीक्षार्थीलाई परीक्षाबाट निष्कासित गरी दुई वर्षसम्म भाषा परीक्षाबाट वञ्चित गरिने जनाईएको छ ।
रोजगार अनुमती प्रणाली (इपिएस) अन्र्तगत जेठ २७ र २८ गते संचालन हुने आठौं इपिएस टपिक (भाषा परीक्षा) का लागि काठमाडौ उपत्यकाका २६ स्थानमा परीक्षा केन्द्र कायम गरेको छ । यस मध्ये काठमाडौंमा १९ र ललितपुरमा ९ वटा कलेज तथा स्कुलमा भाषा परिक्षा केन्द्र कायम गरिएको वैदेशिक रोजगार विभाग इपीएस शाखाका अधिकृत शोभाकर भण्डारी जानकारी दिए ।
यो वर्ष ७५ हजार ६१२ युवाले रोजगारीका लागि कोरिया जान अनिवार्य गरिएको भाषा परीक्षामा सहभागीता जनाउदै छन । शनिबार र आइतबार प्रतिदिन २ सिफटमा परीक्षा संचालन गरिने वैदेशिक रोजगार विभाग इपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । भाषा परीक्षा विहान ८ बजे र दिउसो १२ बजे हुने जनाइएको छ ।
परीक्षा कोरियाको मानब संषाधन विकास बोर्ड (एचआरडी) का प्रतिनिधीको रोहवरमा संचालन हुँदै छ । परीक्षाबाट ४ हजार उत्पादन र ६ हजार २ सय कृर्षि क्षेत्रका लागि नेपाली कामदार लैजाने कोरियाको योजना रहेको छ । परीक्षा मार्फत छनोट गरेका यि कामदारको माग सन २०१७ को अन्त्यबाट शुरु हुने जनाईएको छ । यो छनोट संख्या गत वर्षको तुलनामा तेब्बर बढी हो ।
रोजगारीका लागि कोरिया जान परीक्षा फारम, स्वास्थ्य परीक्षण, रोजगार दरखास्त, अभिमुखिकरण तालिम, बिमा, भिसा शुल्क र हवाई टिकटका लागि लगभग ९० हजार रुपैया लाग्ने गरेको छ ।
लागतभन्दा मासिक परिश्रीमक बढी भएकाले कोरिया नेपाली कामदारको आकर्षक गन्तव्य मुलुक मानिन्छ । कोरियामा हाल ४० हजारभन्दा बढी नेपाली कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
प्रकाशित मिति : २०७४ जेठ १९ (June 02, 2017)
ईपीएस भाषा परीक्षा अक्टुबरमा, यस बर्ष ८ हजार २ सय नेपालीलाई उत्तीर्ण गर्ने (240362 views)सातौ कोरियन भाषा परिक्षाको नतिजा प्रकाशित, ३५१७ जना उर्तिण (97062 views)इपिएस कामदारलाई दुःखीत तुल्याउने गरेर कोरियन सरकारले ल्यायो नयाँ निर्देशिका, तलबबाट २०% सम्म कम्पनीले कटौति गर्न पाउने (83621 views)आठौ कोरियन भाषा परीक्षा असार पहिलो हप्ता सञ्चालन गरिने (74447 views)कोरियामा अर्को दुःखद खबर, रोजगारीका लागि आएको तीन महिना नबित्दै एक नेपालीको सुतेकै अवश्थामा मृत्यु (73529 views)एका विहानै दुःखद खबर, कोरियामा शुक्रबार नेपाल जाने तयारीमा रहेका नेपाली युवकले शौचालयमा झुण्डिएर गरे आत्महत्या (71740 views)